Spaghetti carbonara - Recipe Thermomix | ThermoRecipes
paty40 minitraOlona 6
Iray amin'ireo lovia tena tianao avy amin'ny vadiko, tsara ary ny ahy koa. Tena mora sy haingana ny manao izany ary tsara ny vokatra.
manavaka hatramin'ny andro manaraka dia manankarena be izy ireo. Ataoko antoandro matetika fa misy tavela foana ary ny vadiko no entin'ny vadiko mandritra ny herinandro (misakafo any am-piasana aho ary izy ao an-trano, vintana tsara!) Ary hoy izy mbola tsara be.
La fomba fahandro tena izy Misy atody fa hafa ity version ity ary mety ho an`ny atody tsy mahazaka. Avy amin'ny boky Thermomix fototra izy io.
Resipeo tena mora miaraka amin'ny vokatra manankarena.
100 g ny bacon amin'ny sombintsombiny
500 g ny menaka fanosotra ho an'ny fandrahoana sakafo
100 g ny fromazy grated (Parmesan na izay tiantsika indrindra)
Fromazy grated 50g fanampiny hafafiny rehefa manompo
Rano 1500 g
Ataovy ao anaty vera ny tongolo, dibera, menaka, bacon ary dipoà kely. Izahay dia nandrovitra 15 segondra, amin'ny hafainganam-pandeha 4.
Ampidinintsika ny sisa tavela amin'ny sarony sy ny rindrin'ny fitaratra miaraka amin'ny spatula.
Izahay dia manao fandaharana 7 minitra, maripana varoma ary hafainganam-pandeha 2.
Ampio ny crème sy ny 100 g ny fromazy grated. Izahay dia nandrovitra 10 segondra, amin'ny hafainganam-pandeha 7 ary manao programa izahay 8 minitra, mari-pana 100º ary hafainganam-pandeha 3.
Izahay dia mizaha toetra raha mila sira ary raha izany dia manampy kely. Notehirizinay tao anaty lovia ny saosy.
Raha tsy manasa ny vera, ampio rano 1500 g, sira eran'ny tanana ary menaka oliva. Programa izahay 12 minitra, mari-pana 100º ary hafainganam-pandeha 1.
Rehefa tapitra ny fotoana, dia manampy ny paty amin'ny alalan'ny vavan'ny sarony sy ny fandaharana ny fotoana voalaza amin'ny fonosana spaghetti (10-12 minitra), hafanana 100º ary hafainganam-pandrefesana.
Arotsinay ny spaghetti.
Endasina ao anaty lapoaly ny hena bacon na, toy ny ataoko, dia apetaho amin'ny taratasy misy solika, eo ambonin'ireo voamadinika sy taratasy legioma iray hafa eo amboniny, dia napetraka tao anaty microwave ary napetraka 5 minitra tamin'ny herinaratra farany ambony, manokatra izahay ary jereo raha efa masiaka raha tsy izany dia hametraka minitra vitsivitsy fanampiny isika.
Arosonay amin'ny lovia ny spaghetti, ambony miaraka amin'ny saosy karbonara mafana, hafafiny ny ambin'ny fromazy grated ary apetraho eo amboniny na manodidina azy ireo ny hena bacon crispy.
Fanazavana fanampiny - Fahafantarana ny carbonara pasta marina
Loharano - Boky Tena ilaina avy amin'i Thermomix®
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Vary sy Pasta, Tsotra, Tsy mahazaka atody, Latsaky ny adiny 1
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » Resipeo thermomix » Vary sy Pasta » Spaghetti carbonara
tsara kokoa izany !!!!!!!!!!!
Tiako kokoa izy ireo amin'ny fomba nentim-paharazana fa ny vadiko dia tia azy ireo toy izany ary ataoko be dia be izy ireo.
Jereo fa tsara, tsy hitako izay hatao anio hihinanako ary nanome hevitra ahy ianao…. MISAOTRA ANAO
Valio amin'i Mª ANGELES
Manantena aho fa tianao izy ireo, Mª Angeles. Mirary ny soa indrindra.
tantely dia hoy izy:
Salama Elena !!! Tsy dia fantatro loatra ny sakafo italianina, fa ny rahavaviko izay tany Roma teo amin'ny Erasmus (izay antsoina hoe toa anao) nametra-tànana tamin'ny lohany rehefa nahita ahy nanamboatra paty toa an'io, tsy manana ny carbonara crème ao !!! atody fotsiny sy ny pancetta ... jereo eo amin'ny lafiny tsara, tsy kely kaloria ho an'ny vatana!
Mamaly an'i Honeybunny
Marina izany ry Honeybunny! Efa hitako ny fomba nanaovana azy ireo tany Italia. Heveriko fa tsara ireo endrika! Hitady fomba fahandro italianina aho ary hiezaka ny hampifanaraka azy amin'ny Th, andao hojerentsika ny vokany!
Misaotra anao nanome anay ny fomba fahandro tsy misy atody, satria ny tena izy dia ao an-trano no ilainay miaraka amin'ny crème ranoka (na dia tsy ny fomba fahandro italianina tena izy aza) indray mandeha ihany no nataoko ilay spaghetti carbonara tao Thmx, ny ambiny ao anaty vilany foana! !!
Faly ianao fa tia an'ity recette ity Jessie! Ao an-trano dia tianay be izy ireo ary ataoko matetika izy ireo, tonga lafatra izy ireo. Mirary ny soa indrindra.
Mipetraka any Italia aho, ary marina fa ny karbaona dia voaomana amin'ny atody, izany hoe, atody nokapohina tokoa no anaovana azy ireo ary apetraka ao raha esorintsika avy eo amin'ny hafanana ny paty, mba hisorohana azy tsy hikorontana!
Na izany na tsy izany, tsara ihany koa izany. Andramo miaraka amin'ny crème sy voatabia voajanahary kely na endasina ihany, kely fotsiny ... mahafaly !!!
Misaotra betsaka, Maria! Hanandrana voatabia kely azy ireo aho. Mirary ny soa indrindra.
Tsy mbola nanao azy ireo aho, fa tsy ho ela dia hanandrana azy ireo aho.
Mitovy amin'ny ... ummmmm izy ireo
Misaotra Elena !!
Manantena aho fa tianao izy ireo, Delfi! Miarahaba ary misaotra betsaka anao nahita anay.
Endrey ny hatsaran'izy ireo, andramako izy ireo rahampitso, MISAOTRA
Manantena aho fa tianao izy ireo, Marisol, hoy ianao amiko. Mirary ny soa indrindra.
Vao nataoko !!
Mahafinaritra, ny fanontaniako dia hoe raha azo atao mangatsiaka, manana ambiny ampy aho fa mbola tsy nanisy saosy mihosotra. Azo atao ve izany?
Valiny tamin'i Estefanía
Salama Estefanía, afaka mangatsiaka izy ireo, fa rehefa mandrehitra sy manafana azy ireo dia ataovy miadana, manafana tsikelikely mba hijanonan'ny crème tsara. Mirary ny soa indrindra.
Tony Monge dia hoy izy:
Namboariko fotsiny izy ireo, tsara tarehy be izy ireo saingy manana dudillas roa aho, satria misy roa aminay no tsy nahandro paty firy, ny saosy dia mety ho lasa andro hafa. Ary etsy ankilany, toa hevitra tsara ny fanaovana bacon kely saingy tiako ho fantatra raha ilaina ny taratasy legioma ary aiza no ahafahanao mahazo azy.
Misaotra betsaka amin'ny zava-drehetra ary arahaba soa ato amin'ny bilaogy. Tiako!!
Mamaly an'i Toñy Monge
Salama Toñy, eny afaka mamirifiry ny saosy ianao ary ny takelaka legioma dia saika hita amin'ny supermarket rehetra. Izy io dia antsoina hoe taratasy mihosotra na taratasy mofomamy. Mividy izany ao amin'ny Mercadona aho. Azonao soloina taratasy vitsivitsy ao an-dakozia ity taratasy ity. Mametraka eo amin'ny 4 na dimy eo ambany ianao ary iray hafa eo amboniny. Miarahaba ary tena faly aho fa tianao ny bilaoginay.
nandia dia hoy izy:
Salama. Efa nanandrana aho androany ary misy antony rehefa apetrako ny rano, miaraka amin'ny 1100gr dia efa feno be ilay vera. Ka taty aoriana dia nametraka paty 250gr fotsiny aho, fa na izany aza niverina kely ihany. Inona no tsy nety nataoko? Nojereko ireo vola ary hiteny hoe tsy maninona. Na izany aza, tsara izy ireo, ranon-javatra kely ny saosy.
Mamaly an'i Candide
Salama Cándido, ara-dalàna raha rehefa masaka ny paty, rehefa mangotraka miaraka amina am-bavony dia mety hihoatra. Rehefa mitranga aminao izany dia esory ny goblet ary ampio menaka oliva manaparitaka ary manohiza tsy mahandro ilay goblet. Lazao amiko ny amin'ny manaraka! Mahafinaritra tokoa ity recette carbonara ity. Faly aho fa nankafizinao 😉 Misaotra nanaraka anay!
cristina cabanillas dia hoy izy:
Salama Elena, misaotra anao noho ity bilaogy mahafinaritra ity, vao tsy ela akory izay no nahitako anao ary faly aho.
Toa tsara ity lovia ity, saingy manana fanontaniana aho,
Tsy mamily fiolanana havia ve ianao?
Misaotra ny sainao ary hahita anao tsy ho ela.
Mamaly an'i cristina cabanillas
Salama Cristina, tsy ilaina ny mivily miankavia. Lazao amiko hoe ahoana. Miarahaba ary misaotra betsaka anao nahita anay. Faly aho fa tianao ny bilaoginay!
Tsara fa tena !!!!
Ho an'ny olona firy ny fomba fahandro? Satria vitako izany ary nahazo be dia be aho. MISAOTRA
Ny lehilahy koa dia avy amin'ny thermomix
Mamaly an'i jose manuel
Salama Jose Manuel, raisinay ho lovia tokana izy io ary ho an'ny olona 4. Faly aho fa tianao ilay izy. Mirary ny soa indrindra.
Tsara!, Saingy nanao fanovana kely aho mba hanamaivanana ilay fomba fahandro ary nahomby izy ireo: hitanao, novako ny crème ho an'ny ronono misavoana, ronono mety, ary ny vokany dia nampijaly. Amporisiho ianao hanandrana ny fanovana, maivana kokoa ary tsiro tsara.
Misaotra noho ny fomba fahandro, tsy mora izany. Oroka
Tsara toy inona, Marién!. Hosedraiko izany. Mirary ny soa indrindra.
ny vadiko dia tia spaghetti carbonara, izay nohaniny tamina voatabia hatrany. Misaotra anao tovovavy, ankehitriny dia mihinana isan-karazany izy ary na ny reniny aza milaza aminy fa mahia izy.
MISAOTRA ANAO INDRINDRA ...
Faly be aho, elenairene!
ummmm… zavatra matsiro inona izany !!!! Noraisiko fotsiny ny lakozia, izay tampoka teo, niaraka tamin'ny thermomix izay vitako tamina plis plas, ary nataoko io fomba fahandro hitako io maraina io. Tian'ny oloko ... toy ny miady amin'ny ambiny hohanina anio hariva na rahampitso. Azoko an-tsaina fa na dia tsy mihinana aza izy ireo amin'izao fotoana izao dia hijanona tsy miova, sa tsy izany? Ny hany novaiko dia ny bacon ho an'ny serrano ham, satria tsy tian'ny vadiko ny bacon… ary nahafinaritra izany. Oroka lehibe ary tohizo ...
Salama Elena !! Nataoko tamin'ny saosy ny makaroni, ny tena marina dia tena tsara fa be ranoka ary tiako ny saosy somary matevina kokoa noho izy natsimoka tsara tao anaty paty. Inona no mety ho nataoko raha diso? amin'ny sary matevina ny saosy. Lazao aminao fa faly amin'ny bilaoginao aho.
Tsara ny hevitra ry Diana! Tsy misy zavatra azo ampiana intsony, ankoatry ny fisaorana anao. Faly be aho fa tianao be izy ireo hehehehe.
Raha atao amin'ny 6 io dia ataoko mifanaraka amin'ny ora sy ny ora ve ireo fangaro?
Hodinihiko ny fotoana fa tsy hataoko avo roa heny. Hanomana azy toy izao aho:
Ataovy ao anaty vera ny tongolo, dibera, menaka, bacon ary dipoà kely. Mihodina 20 segondra isika, amin'ny hafainganam-pandeha 4.
Ampidininay ny sisa tavela tavela eo amin'ny sarony sy amin'ny rindrin'ny vera, miaraka amin'ny spatula.
Izahay dia manao fandaharana 9 minitra, maripana varoma ary hafainganana 2.
Ampio ny crème sy ny fromazy grated. Mihodina mandritra ny 15 segondra isika, amin'ny hafainganam-pandeha 7 sy fandaharana 10 minitra, hafanana 100º ary hafainganana 3.
Ny ambin'ny resipeo dia hamela azy hitovy.
Manantena aho fa toa tsara aminao!
Eny, matevina izy io, fa raha tianao kokoa izy io dia azonao atao ny manampy ronono. Tiako, raha ny marina, amin'ity sabotsy ity dia nanomana azy hihinana izahay. Mahafinaritra !!
Noely Sanchez dia hoy izy:
zavatra tsara azoko !!!!
Valiny tamin'i Noelia Rocha Sanchez
Faly izahay fa tianao ity fomba fahandro mahazatra ity !!
JANDRI dia hoy izy:
MADRE MIA !!! VITSOKA INDRINDRA TSY MISY INDRINDRA IZAO ARY TAMIN'NY FITIAVANA !!!! NISAOVAKO NY RESIPA INDRINDRA AZO NY FANAMPINY 500 ML OF CREAM, 350 TAMIN'NY SKIMMED AMIN'NY VONDRAY KELY TOHATRA, ARY Jiro kely KELY IREO ... HAHAHAHAH !!! MISAOTRA NY RESIPEAAAAA
Valiny amin'i JANDRI
Tsara tokoa Jandri fa faly tokoa izahay! Fampifanarahana hazavana tena tsara; P
Efa imbetsaka aho no nanao ny recette nefa tamin'ity indray mitoraka ity dia tsy dia matevina loatra, maninona?
Angamba efa nanova ny marika fromazy na crème ianao? Raha averina indray, avelao ny saosy hahandro lava kokoa, hamela etona ny crème ary hihombo ny saosy. Misaotra nanoratra taminay! Famihinana 🙂
Ao amin'ny resipe dia ilaina ny mamadika fihodinana rehefa manisy spaghetti xq raha tsy potehina be izy ireo.
Salama Rota, raha mahandro paty dia tsy ilaina ny mivily miankavia, fa raha malefaka kokoa ny paty ary mahandro aloha, ho fiarovana dia afaka mametraka tsara ny fihodinana amin'ny ankavia isika. 🙂 Misaotra tamin'ny fanarahana anay !!